अहिले कालापानीबाट भारतीय सेना भगाउने समय हो, अयोध्या र रामको कुरा ल्याएर मुख्य कामलाई ओझेल पार्ने ? - Himali Patrika
अहिले कालापानीबाट भारतीय सेना भगाउने समय हो, अयोध्या र रामको कुरा ल्याएर मुख्य कामलाई ओझेल पार्ने ?
हिमाली पत्रिका १ साउन २०७७, 2:57 pm
काठमाडौं, १ साउन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य डा. भीम रावल आक्रामक बोलीका कारण लोकप्रीय छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राम र अयोध्याको प्रसंग निकालेर मानिसहरुलाई भड्काउन खोजेको र कालापानीको विषय मोड्न खोजेको आरोप लगाए । पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका डा. रावलसँग यीनै सेरोफेरोमा ऋषि धमलाले गरेको विशेष कुराकानीः
प्रधानमन्त्रीले अयोध्या नेपालमा पर्छ, राम नेपालमा जन्मिएका हुन् भन्दा तपार्इंहरुलाई के को आपत्ति ?
यो राम कहाँ जन्मनुभयो ? अयोध्या कहाँपर्छ ? भन्ने कुरामा विवाद गरेको होइन । त्यो कुरा ठीक हो कि होइन । उहाँले के तथ्य प्रमाणका आधारमा त्यसो भन्नुभयो । देशको प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले देशको बारेमा अमुक अभिव्यक्ति दिँदै हिंड्न मिल्दैन । अहिले हामी कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका भारतले अतिक्रमण गरेका जमीनबाट भारतीय फौज फिर्ता हुनुपर्छ भनेर सबैभन्दा महत्वका साथ माग गरिरहेका छौं । ती भूभागमा भारतले बाटो बनाइरहेको छ । ती जमीन फिर्ता हुनुपर्छ भनिरहेको बेलामा अब अयोध्या र रामको बेकसुरको कुरा विवादमा ल्याइदिएर गर्नुपर्ने मुख्य कामलाई ओझेलमा पार्न किन खोजिएको ? त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति छ मेरो ।
तपाईंहरुले विरोध गरिरहँदा प्रधानमन्त्री सप्रमाण बोल्नुभएको होला नि ?
उहाँसँग सप्रमाण छ भने सबैभन्दा पहिला त्यसको बारेमा सरकारमा छलफल गर्नुपर्छ । यो कुरा उहाँ आपूmले मात्रै भन्ने होइन । मैले तपार्इंं नक्साको कुरा त भनिहाले । त्यसभन्दा अर्को उहाँको कुनै काम देखिँदैन । त्यो नक्सा बनाउनको लागि हामी त्यत्रो दबाब दियौं । पार्टीले निर्णय नै गर्यो । धेरै समयपछि उहाँले नक्सा ल्याउनुभयो त्यसको लागि हामीहरुले धन्यवाद दिएकै छौं ।
यदि प्रधानमन्त्री त्यस्तो गम्भीर रुपमा छलफल, अनुसन्धान भएको छ तथ्य, प्रमाण नै छन् भने पहिला त पार्टीमै छलफल गर्नुपर्यो नि । पार्टीमा पनि अहिले उठाउने कि नउठाउने भन्नुपथ्र्यो । जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीको काम के हुन्छ ? अनि कुटनीतिक रुपमा कुरा गर्न छोडेर जाने । नेकपाको दुई तिहाई नजिकको बहुमतको सरकार भएको बेलामा गर्नुपर्ने काम चाहीं नगर्ने अनि अनावश्यक रुपमा देशलाई विवादमा हाल्ने र त्यो पनि एउटा औपचारिक भावना प्रकट गर्ने, औपचारिक निकायमा कुरा नगर्ने । त्यो जिम्मेवार व्यक्तिले गर्ने काम भएन नि ।
सत्यनारायण मण्डलले त भीम रावल पनि सञ्चारमन्त्री, गृहमन्त्री भएको मान्छे हो, त्यो बेलामा काम गर्ने अनि प्रधानमन्त्रीको विरोध मात्रै गर्ने भन्नुभयो नि ?
मेरो हैसियत खोज्ने व्यक्तिहरुलाई फेरि कुरा गर्न चाहन्न । यत्तिमात्रै भन्छु, ‘उहाँहरुले यो कुरा ल्याएर स्थायी कमिटिमा राख्नुस् न । मसँग सोध्नुस् न, मैले तत्कालीन नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारमा हुँदा राष्ट्रिय स्वाधिनताको लागि त्यो सरकारले के के गर्यो, त्यसपछि मैले गृहमन्त्री हुँदा के गरेँ, अहिलेका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियताको बारेमा के गरिरहनुभएको छ, रक्षमन्त्री हुँदा मैले भारतीय नाकाबन्दीमा के के गरेँ, यस्ता विषयमा स्थायी कमिटिमा राख्ने आँट देखाउनुस् न ।
यति राम्रो काम गरेको सरकारलाई विरोध गर्न मिल्छ ?
उहाँहरु अहिले एक त सत्ता र शक्तिको अन्धभक्ति गरिरहनुभएको छ । या त पार्टी भनेको केही पनि होइन । देशभन्दा पार्टी ठूलो, पार्टीभन्दा व्यक्ति ठूलो । व्यक्तिको पद र बानी नै सर्वोपरी हुन् भन्ने यो सामान्ति संस्कारबाट ग्रसित हुन सबैले छोड्नुपर्छ । मैले जे कुरा उठाएँ, यो नेपालको प्राथमिकता पर्ने आवश्यक कुरा हो कि होइन ? यहाँ हाम्रो भूमि अतिक्रमित भएको छ भन्छौं । आफ्नो देशको सीमानाभित्र अर्को देशले आएर आफ्ना सेना राख्ने बाटो बनाएर उद्घाटन गर्ने गरेको छ ।
त्यसको समाधानको बाटोतिर लाग्नुपर्नेमा केही छैन । फेरि मैले दुई देशबीच युद्ध हुनुपर्छ भनेको होइन । अरु मुलुकमा सीमानामा अतिकथि यताउता हुँदा पनि कति ठूलो युद्ध भइरहेको छ । त्यस्तो महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा भारतसँग कुराकानी गर्ने, वार्ता गर्ने १९५० का असमान सन्धीका बुँदाहरु हटाउनुपर्छ भनेर हामीले पहिलादेखि भन्दै आएका छौं ।
यस्ता कुरामा चाहीं कत्तिपनि काम नगर्ने अब यो कति हजार वर्षदेखि चलिआएको जुन एउटा पौराणिक कथा र धार्मिक ग्रन्थहरुमा आधारित त्यो कुरा ल्याएर विवाद गर्ने मानिसको भावना भड्काउने कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र डुबानमा परेर तराई, मधेसका जनताले पाएको दुःखबाट ध्यान अर्कोतिर मोड्ने काम बाहेक केही होइन । यसमा सबैभन्दा आपत्तिजनक कुरा के हो भने देशका समग्र जनताको ध्यान प्रमुखताको कुराबाट अन्यत्र मोड्ने खोजिएको छ ।
सत्यनारायण मण्डलले तपाईंको विभिन्न सञ्चारमाध्यममा धेरै आलोचना गर्नुभएको छ नि ?
म लोकतन्त्रमाथि विश्वास गर्ने मान्छे हो । उहाँहरु जस्तो बुरुक्क उफ्रिएर तथ्यहीन तरिकाले अर्कोमाथि गालीगलौज गर्न मेरो नैतिकताले दिँदैन । म जुन पार्टीमा लागेँ त्यसबाट मैले जुन शिक्षा ग्रहण गरेको छु । त्यसैले कसैले उत्तेजना फैलाउँदैमा त्यसमा बहकिएर गालीगलौज गर्दिन । यसमा सामान्य कुरा भन्छु अहिले नेपालमा उत्पादित तरकारीहरु एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान नसकेर किसानहरु मारमा परिरहेका छन्, पारीबाट भने ट्रकका ट्रक तरकारीहरु खुलमखुल्ला नेपाल आइरहेको छ ।
यत्रो कोरोनाको महामारी त्यो कहाँबाट आयो ? किन ल्याइयो केही लेखाजोखा छैन । अनि खोक्रा राष्ट्रियता, आत्मनिर्भरताका कुरा गर्ने ? आफ्ना देशका किसानहरु कोरोनाको मारमा परेर रोएर बसेका छन् त्यतातिर कसैले ध्यान नदिने अनि बेप्रसंगको कुरा गरेर जनताको ध्यान अन्यत्रा मोडेर वास्तविक समस्याबाट भाग्ने जुन हर्कत देखाउनुभएको छ ।
म यसमा कुनै नराम्रा कुरा भन्दिनँ । तर, प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिलाई लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयले खण्डन समेत गर्नुपर्ने स्थिति आयो । अनि यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्दैन ? किन त्यस्तो काम गरेको ? यो देशमा पार्टी, सरकार, यत्रा बुद्धिजीवी, नेताहरु छन् । उहाँहरुसँग कुनै छलफल गर्नुनपर्ने ? एउटा जिम्मेवार व्यक्तिले जे पायो त्यो बोल्दै हिड्दा परराष्ट्र नीतिमा के समस्या आइपर्छ त्यतातिर ध्यान नदिने ।
प्रधानमन्त्रीले मनलागी बोलिरहँदा पार्टीका नेताहरु हेरिरहने कि केही एक्सन गर्ने त ?
यस्तै भएर मैले पहिलादेखि भन्दै आएको छु । यो पार्टी विधि, पद्धतिमा चल्नुपर्छ । आफ्नो राजनीतिक घोषणापत्र छ, परिपाटी छ, नीति सिद्धान्त छ । स्थायी कमिटि, केन्द्रीय कमिटि र सचिवालयको बैठकमा आउनुहोस् । आफ्ना विचारहरु राख्नुस् हामीले उठाएका विषयमा खण्डन गर्नुहोस् ।
अकाट्य तथ्यहरु छन् स्वीकार गर्नुहोस् । देशको सर्वोपरीलाई ध्यान दिनुहोस् । पद भएन भने पार्टी नफुटाउनुस् । निर्वाचन आयोगमा गएर आफ्नो मान्छेलाई खुसुक्क पार्टी दर्ता गराउन लगाए जस्तो काम नगर्नुहोस् । विभिन्न षड्यन्त्र गरेर पार्टी फुटाउने क्रियाकलापमा नलाग्नुहोस् । कोरोना रोकथामका सामाग्री खरिदमा भएका अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्नुहोस् । हामीले उठाएका कुरा चित्त नबुझे खण्डन गर्नुहोस् । बैठकको बहुमतले उठाएका कुराको सम्बोधन गर्नुहोस् भनेर त हामीले भनेकै छ त ।
पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली पार्टीभन्दा शक्तिशाली बन्दै जानुभएको तपार्इंंहरु त बोल्दिनुहुन्छ छोडिदिनुहुन्छ अनि के गर्ने ?
कुनै पनि व्यक्ति सर्वशक्तिमान भएर म सबैलाई बडारेर एक्लै अगाडि जान्छु भन्ने कुरा सम्भव छ नेपालमा ? यो हुने कुरा हो ? उहाँ सर्वशक्तिमान भएँ भनेर सोच्नुभएको छ भने म त्यतातिर जान चाहन्न । म यत्तिमात्रै भन्छु अहिले मुलुकभर बाढीपहिरोले जनता आक्रन्त छन् । कतिपय घरवारबिहीन भएका छन् ।
कत्तिले सबै खाद्यन्न बगाएर खान र बस्ने अभावबाट गुज्रिएका छन् । यस्तो बेलामा सरकारले ती पीडितको पक्षमा ढुक्कसँग काम गरोस् भनेर हामी चुप लागेको हो । पहिला पनि हामी कोरोनाको कारण हामी चुप लागेका थियौं । यी सबै समस्यामा छलफल गरेर काम गरेको भए राम्रो हुने थियो ।
उहाँ बैठकमै आउनुहुन्न । आइहालले पनि आफ्ना कुरा राखेर हिड्नुहुन्छ । अरुका कुरै सुन्नुहुन्न । अहिले बाढीपहिरोले मुलुक र जनता आक्रन्त छन् । प्रधानमन्त्री भने राम र अयोध्यामा पुग्नुभएको छ । त्यो पनि आपूmलाई जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेला । यही राम र अयोध्याको कुरा पनि उहाँले स्थायी कमिटिमा ल्याएर मैले राम र अयोध्याको बारेमा यस्ता कुरा भेटेँ साथी हो यो उचित हो कि होइन ? हामीले सीमाको विषयमा नक्सा प्रकाशित गरेका छौं । त्यहाँबाट भारतीय फौज हटेको छैन । बाटो सुचारु भइरहेको छ भनेर सल्लाह गर्नुपर्दैन ? अनि जे मनमा लाग्छ त्यो बोल्दै हिड्ने ?
केपी शर्मा ओलीले त कसैले कराएर केही हुँदैन म अहिले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पद छोड्दिन भन्नुभयो नि ?
कसले कुन पद छोड्ने, कसले कुन पद नछोड्ने, कसले के गल्ती ग¥यो, कसले कहाँ राम्रो गर्यो त्यसको मूल्यांकन त पार्टीको बैठक गर्दछ नि । पार्टीको बैठकमा छलफल बहस गरेर निर्णय गर्ने कुरा हो ।
पार्टीमा त प्रधानमन्त्री बलियो हुनुहुन्छ नि ?
बलियो हुनुहुन्छ भने राम्रो भयो त निर्णय गरे भइगयो नि । ल मैले उहाँको आलोचना गरेँ त्यसलाई स्थायी कमिटि बैठकको बहुमतले यो दिन भनेको फलानाको भनाई गलत भयो भन्दा भयो त । अनि पार्टीको विधि, प्रक्रिया, सिद्धान्त नमान्ने । उहाँका समर्थक केही साथीहरुले जो महाधिवेशनबाट निर्वाचित पद भन्ने साथीहरुले महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएको मेरो उपाध्यक्ष पद कहाँ गयो । त्यो दिनुपर्यो नि । महासचिव ईश्वर पोखरेलको पद कहाँ गयो ?
युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य उहाँहरुका पद कहाँ गयो ? त्यो पनि दिनुपर्यो नि । यस्ता नचाहिने कुरा गरेर साथीहरुका मनलाई भाँडेर कुनै पनि जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्तिले देश हाक्न सक्ने अवस्था हुँदैन । बैठकमै नबस्ने, अरुका कुरै नसुन्ने, आलोचना नसहने हो भने हिजो हामीले एकतन्त्री शासन किन हटाएको त ? त्यसको लागि हज्जारौंको ज्यान किन खेर फालेको त ?
स्थायी कमिटि बैठकले दुई गते भएन भने तपार्इंंहरुसँग के विकल्प छ त ?
त्यसको लागि हामीसँग कुनेकौं विकल्पहरु छन् । यो पार्टी एकताबद्ध होस् । मैले त जुनसुकै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, यदि यो पार्टी कसैले फुटाउने प्रयास गर्छ भने त्यो अपराधी हो । यो पार्टी फुटाउने कुरा गर्ने मानिस नेकपाभित्रको धोकेवाज हो । त्यस्ता व्यक्तिलाई पार्टी कारबाही गर्छ । यहाँ कुनै व्यक्तिहरु मैले भनेको अनुकूल हुँदैन भने म पार्टी फुटाउन पनि तयार छु भनेर जो लागेको छ । त्यो गद्दारी र अपराधी हो । त्यो गर्नुहुँदै अरु कुरा पदको समायोजन गर्ने, कुन व्यक्तिले कुन पद लिने भन्ने कुरा पार्टीमा छलफल गरेर तय हुन्छ ।
केपी शर्मा ओलीले दुई पद लिएर समस्याको समाधान हुन्छ कि हुँदैन ?
यहाँ कसले दुवै पद लिने । कसले के पद छोड्ने, कसले कुन पद लिने भनेर बाहिर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै हिड्ने विषय होइन । हाम्रो स्थायी कमिटि छ । कतिपय साथीहरु भन्छन्, केन्द्रीय कमिटि जाऔं भन्नुहुन्छ । जाऔं न त जहाँ गएपनि पार्टीको प्रक्रियामा जाऔं ।
त्यहाँ त्यत्रा बुद्धिजी, अनुभवी नेताहरु पनि हुनुहुन्छ । यत्रा विकेकसिल जनताहरु पनि छन् भन्ने विश्वास गरौं । अनि अरुले भनेको कुरै नसुन्ने मैले बोलेका र मलाई लागेका सबै ठीक हुन् भन्ने कुरा त लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने अझ कम्युनिस्ट पार्टीको नेतालाई सोच्न त सुहाउँदै सुहाउँदैन ।
स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरणमा ओम्नी ग्रुपसँग उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल तानिनुभयो नि ?
अब तथ्य, प्रमाण, सूचनाको आधारमा सार्वजनिक लेखासमितिले को कोसँग बयान लिन्छ म त्यसको सदस्य होइन । त्यो कुरा मलाई थाहा पनि छैन । म तपाईंलाई यत्तिमात्र भन्छु, ‘ओम्नी समूहसँगको स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्ने विषयमा जुन विवाद आएको छ । त्यो भ्रष्टाचारपूर्ण क्रियाकलाप हो भन्नेमा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान र सार्वजनिक लेखासमिति र त्यसबाहेक अरु कुनै सरकारी निकायहरु सबैले निश्पक्ष ढंगले हेर्नुपर्छ । र, त्यसमा अनियमितता गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा नेकपाका धेरै नेताहरुले भन्दै आएका छन्, मैले पनि भनेको छु । अब कुन नेतालाई कतिबेला बोलाउँछ । कसका के कसुर छन् । कसलाई के कारबाही हुँदैछ । कसलाई के कारबाही हुन्छ त्यो मलाई थाहा हुने कुरा भएन ।
खेतीसिजनमा किसानहरु मल नपाएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् नि ?
एकदमै राम्रो पश्नगर्नुभयो । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने काम चाहीं नगर्ने । मैले भारतबाट आएको तरकारीको कुरा गरेँ, तपार्इंंले मलको कुरा गर्नुभयो । अर्को समस्या सलह आएको छ हाम्रो देशमा । यसरी किसानमाथि समस्यामाथि समस्या थपिएका छन् । अब त्यो सलहलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने । त्यसले किसानलाई पु¥याएको क्षतिको कसरी परिपूर्ति गर्ने ? खेतीको सिजनमा सबै किसानलाई सहज ढंगले मलको आपूर्ति कसरी गर्ने ? आफ्नो देशमा उत्पादित तरकारीलाई बजारसम्म कसरी पुर्याउने ।
बाहिरबाट अवैध ढंगले भित्रिएका तरकारीलाई कसरी रोक्ने त्यतातिर ध्यान छैन । सीमानाको आफ्नो भूभागमा भारतीय फौज बसेको त्यसलाई कसरी हटाउने भनेर सल्लाह गर्नुछैन । अनि राम र अयोध्याको बहस चलाएर जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने । अनि प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिको आफ्नै परराष्ट्रमन्त्रालयले खण्डन गर्नुपर्ने । भारतका कतिपय जनताले भारतले नेपालमाथि गरेको अतिक्रमणको समर्थन गरिरहेका थिए । त्यसलाई भड्काएर गलत सावित गराउन खोज्ने ?